Kooxda Roma oo €33.8m ku raadinaysa Riyad Mahrez – Gool FM
(Roma) 13 Luulyo 2017 – Kooxda AS Roma ayaa sida lasoo sheegayo waxay doonaysaa laacibka Riyad Mahrez ee Leicester City oo ay ula diyaar tahay £30m (€33.8m) si uu ugu bedelo Mohamed Salah.
Garab-weerarkan daanta midig ayaa wacdaro ka dhigayay Premier League sanadkii ay kooxdiisu hanatay horyaalka, isagoo dhaliyay 10 gool, 8 goolna dhigay 48 kulan oo rasmi ah.
Sida ku qoran The Sun iyo Sky Sport Italia, maareeyaha ciyaaraha ee AS Roma ee Monchi ayaa kooxdiisa wax ka waydiiyay helitaanka Mahrez. Dalabka furitaanka ayaa lagu sheegay ilaa £30m (qiyaastii €33.8m), balse Foxes ayaa dalbanaysa £50m (€56.4m).
Mahrez ayaa tababar-horaadka la bilaabay Leicester City, balse wuxuu u muuqdaa nin ay ka go’an tahay inuu ka tago kooxdiisa, iyadoo ay Roma oo Mohamed Salah ka Liverpool oo bixisay €42m oo lagu daray €8m ay doonayso beddel adag.
Laacibka Juan Bernat oo ay isku haystaan Man City, Barca & Roma oo sheegay inuu ka tegayo Bayern